‘भैरे’ ओपनिङ : एकलमा सुखद, मल्टिप्लेक्समा सुख्खा ! « Ramailo छ
‘भैरे’ ओपनिङ : एकलमा सुखद, मल्टिप्लेक्समा सुख्खा !
समय : 10:19 pm
शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म भैरेले देशका एकल पर्दामा सुखद व्यापार गरेको रिपोर्ट । दयाहाङ राई स्टारर फिल्म हेर्न शनिबार एकल पर्दामा दर्शकको चाप राम्रै देखियो । गुण, गोपी लगायत केही हलहरुमा शो शाउसफूल समेत रह्यो ।
एकल पर्दामा सुखद रहंदा मल्टिप्लेक्समा भने भैरे को व्यापार सुख्खा रह्यो । कम शो पाएको फिल्मले मल्टिप्लेक्समा दर्शक साथ राम्रो पाएन । बरु दोश्रो सातामा चलिरहेको बोबीमा दर्शकको उपस्थिति राम्रो देखियो । यसअर्थ मल्टिप्लेक्समा भैरेको सुरुवाती व्यापार सुख्खा जस्तै रह्यो । सुरक्षा र बुद्धिसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
शनिबार भैरे टिम चावाहिलको गोपिकृष्ण हल पुगेको थियो । एकल पर्दामा दर्शकले साथ दिएको भन्दै टिम खुसी देखियो । निर्देशक एभ्रेष्ट सूर्य बोहोराले राजनीतिले गर्दा मल्टिप्लेक्समा आफ्नो फिल्मले शो कम पाएको दाबी गरे । क्युएफएक्सको मल्टिप्लेक्सले भैरेलाई जम्मा दुई शो दिएको थियो ।
भैरेमा दयासँगै बर्षा सिवाकोटी, बुद्धि तामांग, बिक्रान्त बस्नेत, सुरक्षा पन्त, अनुभव रेग्मी लगायतले अभिनय गरेका छन् ।